Ninkii xaaskiisa la kufsaday misna la diley oo la kulmay fal kale oo la yaab leh! | Hadalsame Media
Home Wararka Ninkii xaaskiisa la kufsaday misna la diley oo la kulmay fal kale...
Ninkii xaaskiisa la kufsaday misna la diley oo la kulmay fal kale oo la yaab leh!
(Garoowe) 12 Abriil 2019 – Cabdi Maxamed Faarax oo ah ninka qabey gabadhii inta la kufsaday misna lagu diley magaalada Garoowe ayay arrin cusubi lasoo gudboonaatey.
Ninkan oo ay xaaskiisu kaga dhimatay laba carruur ah oo wiil iyo gabar ah ayaa 4 cisho ku jirtey isbitaal maydka lagu kaydiyo oo ku yaalla magaalada Garoowe.
Faarax oo ah darawal iyo beeraleey isla markaana madi ah ayaa isbitaalka u tegey inuu kasoo qaado maydka xaaskiisa si loo aaso, balse waxaa la waydiistey in aanu bixin karin ilaa uu bixiyo 300 oo doollar, iyadoo ay qaan sheegtada ka muuqato lacagta oo aan la faahfaahin waxa lagu qabtay.
”Waan iska bixinnay lacagtii, waayo waxaan nahay dad mayd u yaallo, dowladdana uma sheegin” ayuu yiri Faarax oo la hadlayay Raadiyaha Garoowe, iyadoo ay dad badani la yaabeen naxariis darrada isbitaalka, iyadoo arrintani tahay dhiig miirasho cad.
Faarax ayaa rajeeyay inay xaaskiisu cadaalad heli doonto, isagoo shacabka usoo jeediyay in ay ka feejignaadaan meelna uga soo wada jeestaan falalka gurracan ee kusoo badanaya degaanno ka tirsan Puntland iyo guud ahaan Somalia.
Kiiskan ayaa kusoo beegmay, jeer aan weli la xallin kiisas kale oo kufsi la yaab leh ah, sida midkii Caasha Ilyaas oo ahayd gabar 12-jir ahayd oo inta la kufsaday misna si xun loogu diley magaalada Gaalkacyo.
Previous articleDAAWO: ”Waxaan haynaa VAR iska indha tiraya wixii aan arkayney ee Saalax sameeyay!” – Mourinho oo farta ku fiiqay laacibka Liverpool + Sawirro
Next articleDAAWO: Kenya oo sheegtay inay Somalia kaalmo waydiisatey!